Weriyayaal iyo dad kale oo lagu xiray Congo. - Wargeyska Faafiye
Booliska dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo ayaa xabsiga dhigay weriyayaal caalami ah, diblomaasi, kooxaha xuquuqda u dooda iyo fannaaniin, kuwaas oo ka qeyb galayay shir jaraa’id oo looga hadlayay arrimo khuseeye bulshadda rayidka ah ee dalkaasi.
Kooxaha u ololeeya xuquuqda dadka oo ka kala yimid gudaha Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, Senegal iyo Burkina Faso, ayaa ka qeyb galayay shir jaraa’id oo ka dhacayay caasimadda Kinshasa, kaasoo lagu soo bandhigayay urur cusub oo ay yeelan doonaan dhalinyaradda Congo, oo loo bixiyay Filimbi.
Recent PostsBoqorka Sacuudiga oo wiilkiisa ka dhigay dhaxal sugeDaawo VIDEO : ‘Gaajo ayuu u dhintay wiil aan dhalay oo shan jir ahaa’Ahmed Kathrada, ninkii la xirnaan jiray Mandela, oo dhintayGeneral favors more aggressive approach in SomaliaUNHCR oo dalbatay baaritaan laagu sameeyay qaxootigii Soomaalida ee Yaman lagu laaayay.Editor’s Pick . Telefoonkii Hitler oo $243 kun oo dollar lagu iibsaday.43Random PostsRa’iisul wasaaraha oo la kulmay wasiirka arrimaha dibadda Switzerland.A Somali boy dies in the Minnesota town of Eagan while playing "cops and robbers" with unsecured gun.Britain oo Danjire Cusub u Magacaawday Somalia.'Dont play with fire' Erdogan warns Russia .Madaxweyne Shariif oo eedeyey Dalal Badan .